तरलता अभावको समस्या समाधान !!! - Inquiry Nepal
तरलता अभावको समस्या समाधान !!!
नेपाल न्युज, माघ १४
बजारमा लगानी योग्य पूँजी तरलता अभाव कम गर्न आजै राष्ट्र बैकबाट ५२ अर्ब रुपैयाँ बैकहरुमा प्रवाह हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र वोर्डले
बिहीबार साँझ सेयरको प्राथमिक निस्कासनबाट उठेको रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेपछि आजै पैसा फिर्ता हुने भएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैक र धितोपत्र वोर्डको संयुक्त पहलमा पैसा फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको हो। आज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीको सेयरमा परेको पैसा फिर्ता हुन लागेको हो।
‘हामी आजै पैसा रिलिज गरिदिन्छौं’ नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘यसले बजारलाई निकै हसज पार्छ।’
यसअघि सेयर बिक्रि बन्द भएको छ कार्यदिनसम्म जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो। पुरानो व्यवस्थाले वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या आएको भन्दै पैसा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
साथै पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि भूकम्प प्रभावितहरुको आबास निर्माणको दोस्रो किस्ता बापतको रकम प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि झन्डै १२ अर्ब बराबरको रकम निकासा दिएको र सो रकम पनि बैंक मार्फत नै प्रदान गरिने हुँदा सो रकम पनि बैंकिंग प्रणालीमा तरलता समस्या समाधानको सहायक हुने छ !